Somaliland.Org » Maxaa laga yidhi go’aanka Guurtida ee muddo-kordhinta Madaxtooyada?
March 29th, 2009 Comments Off “Dabcan, waa go’aan Guurti, laakiin waxaanu u arkaa inuu gabal-dhac ku yahay geedi-socodkii Dimoqraadiyadda Somaliland oo uu waxyeelo’aan…” Axmed Siilaanyo
Hargeysa (Ogaal)- “Waxaan u arkaa go’aan ayaan-daro ah. Dabcan, waa go’aan Guurti, laakiin waxaanu u arkaa inuu gabal-dhac ku yahay geedi-socodkii Dimoqraadiyadda Somaliland oo uu waxyeelo’aan laga soo waaqsanayn u geysanayo horumarkii dalka, kuna bilaabay jidkii Keli-talisnimada iyo xorriyad la’aanta inuu horseeday baan arkaa inuu yahay aad iyo aadna waan uga xumahay, waase go’aan sidaa aanu u aragno u dhacay. Midda labaad, waxa la yaabka lihi waxa weeye; Golaha Guurtidu wuxuu u xilsaaran yahay inuu kordhiyo ama aanu kordhin isagoo sabab uga dhigaya haddii ay dalka ka jirto Nabadgelyo-daro, waqtiga doorashadu dhacayso Nabadgelyo-daro jirto, weliba mid ah in aanay doorasho qabsoomi karayn. Dalka Somaliland wuxuu mar walba ku faanayay inuu xorriyad, xasilooni iyo degenaansho haysto, sababta qodobkaa loo cuskadayna waa wax aan suurtogelayn, Sharciga iyo Distoorka ku jirin oo ka gudubsan weeye. Midda saddexaad, Komishanka doorashooyinka ayaa ku shuqul leh inay waqtiga qabtaan. Markaa, Komishanku waqti bay soo qabteen, waqtigii ay soo qabteen laftigiisiina way ka gudbeen (Guurtidu). Waxa dhab iyo biyo kama dhibcaan ah inay dawladdu awoodo badan isticmaalaysay oo ay awoodo dhaqaale isticmaalaysay.” Sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ka hadlay sida uu u arko go’aanka Golaha Guurtida ee muddo-kordhinta Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkiisa.
Guddoomiyaha KULMIYE oo xalay u waramay Laanta afka-Soomaaliga ee idaacadda BBC-da, waxa uu sheegay in Golaha Guurtidu aanu awood u lahayn dib-u-riixa doorashada. “Guurtidu shuqul kuma laha shaqadeedana maaha inay qabato waqtiga doorashadu dhacayso. Arrintaa haddii ay ku celinayaan waxay ahayd inay ku celiyaan Komishanka oo ay yidhaahdaan waqti munaasib ah qabta oo soo-jeediya. Guurtidu xaq uma laha inay iyadu qabato muddada doorashada oo taasi cid kale ayay xilkeeda tahay, mar walbana waanu caddaynaynay Sharciguna wuu qeexayaa. Time-line-ka (waqtiyaynta doorashada) waxa Sharciyan iska leh Guddiga doorashooyinka, mana aha inay Guurtidu qabato. Arrimahan kale oo dhana Sharcigu si qudha uun buu ogolaanayaa in loo kordhiyo, taasina waxa weeye Nabadgelyo-daro ka taagan maalinta doorashadu dhacayso ee la soo-jeediyo. Laakiin, taasi wax kastaba ha ahaatee wax la soo dhaafay weeye, maanta Nabadgelyo-daraa taala jirta ama ay tilmaamayaana ma jirto, wax isu-tanaasul ah iyo talo ah oo laga waydiiyay Axsaabta iyo talooyinkoodiina midna may soo qaadan. Markaa, waxaan aaminsanahay oo aad u cad in maanta geedi-socodkii Dimoqraadiyadda Somaliland meel weyn lagaga dhacay, inay dhaawac weyn ku keenayso dadnimadii iyo horumarkii dalku ku talaabsanayay ama umaddeedu ay hawaysanaysay ee ay hiyiga ku haysay inuu dhaawac weyni soo gaadhay baan u arkaa.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha oo la waydiiyay sida uu u arko sababo ay Mudaneyaasha go’aankaa meelmariyay ku dooddeen inay saldhig u yihiin arrintaas. Mar la waydiiyay maadaama ay go’aankaa diidan yihiin sida ay xalka u arkaan waxa uu ku jawaabay, “Annagu xal maanta ka hadli mayno, dareenkayagii u horeeyay kaa weeye, xisbi ahaana weli talo iskumaanu iman, waananu isugu iman doonaa kana tashan doonaa, umadda oo dhan way u taalaa.” Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ka sokow awoodo dhaqaale oo sida uu tilmaamay Xukuumaddu adeegsaday, ay jireen dad sife aan Sharci ahayn loo xidhxidhay, kuwaasoo ay ka mid yihiin xubno Suxufiyiin ah oo shalay Boolisku xidheen.
Dhinaca kale, xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa la filayaa inuu maanta war rasmi ah ka soosaari doono aragtidiisa la xidhiidha go’aanka Golaha Guurtidu muddadii xil-haynteed ugu kordhiyay Madaxtooyada. Siday tibaaxeen ilo xogogaal ahi, xisbiga UCID waxa uu aaminsan yahay aragti lid ku ah go’aanka muddada lixda bilood loogu kordhiyay Madaxweynaha, isla markaana sida la sheegay waxa uu u arkaa in aanu Golaha Guurtidu xaq u lahayn inuu sameeyo muddo ka baxsan cayimaadii Komishanka doorashooyinka ee 31 May 2009. “Xisbi ahaan waanu ka tashanaynaa, berina (maanta) waxaanu soosaari doonaan mawqifka aanu arrintaa ka taaganahay.” Sidaa waxa yidhi xubin ka tirsan xisbiga UCID.
Marka laga yimaado aragtida Mucaaradka, taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee UDUB ayaa durba bilaabay inay muujiyaan soo-dhawaynta muddo-kordhinta oo Xukuumaddu olole u gashay. Siday xalay laga faafinayay warbaahinta Qaranka ee Xukuumaddu gacanta ku hayso, waxa bilaabmay hambalyo ay masuuliyiinta Gobollada, degmooyinka iyo Madax-dhaqameedka qaarkood ku taageerayaan go’aanka Guurtida. Hase yeeshee, taas bedelkeeda waxa jira dareen kakan iyo didmo ay bulshada intooda badani ku qaabishay go’aankaas shalay. Duullaankii gudoomiye-ku-xigeenka iyo Dulqaadkii Saleebaan
Muuqaalkii madasha iyo Go’aankii Golaha Guurtida ee shalay
“Qaraxyadii 29 October aynu ku beegno, maalinta uu la wareegayo Madaxweynaha la doortey” “Waar Siciidow Fadhiiso, waxba lagu noqon maayo tirada’e.”
“Waxaan ahay Gudoomiye kula mid ah Adiga”
Gudoomiye ku xigeenka labaad
Hargeysa (Ogaal) – Golaha Guurtida Somaliland ayaa fadhi ay shalay yeesheen ugu kor kordhiyey waqtiga xil-haynta Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin iyo Madaxweyne ku xigeenka Axmed Yuusuf Yaasiin Ilaa October 29. Islamarkaana waxa ay cod ku meel-mariyeen in doorashada madaxtooyadu qabsoonto September 29